KONRAD CREDIT BANK | Tolotra fampindram-bola
Ny trosa arahin'antoka
Manomboka tetik'asa trano fonenana, fividianana voalohany, fampiasam-bola hofidina, fividianana trano faharoa na kitapo fampindram-bola any an-trano.
Ny fampindram-bola amin'ny fampiasam-bola
Ny fampindramam-bola dia crédit ahafahan'ny orinasa mametraka fampiasam-bola matihanina amin'ny fotoana maharitra na maharitra. Ny fampindram-bola amin'ny ankapobeny dia mifandraika amin'ny famatsiam-bola ny renivola ara-bola amin'ny orinasa, miaraka amin'ny tanjona voalohany amin'ny famolavolana na hanavaozana ny fananana raikitra sy ny fitaovana miasa.
Ny tratry ny fiara
Ny trosa fampivondronana trosa dia azo ampiasaina handoavana ny trosan'ny carte de crédit, fandoavana ny volavolan-dalàna be loatra, fampindramam-fiara ary maro hafa. Rehefa mamerina ny trosanao amin'ny trosa fanamafisana ianao dia mila mandoa ny trosa vaovao ihany.
Tsipika momba ny trosa
Ny andiam-trosa dia mifandraika amin'ny trosa misokatra sy azo antoka, ny fatrany ambony indrindra ary ny fahazoana mandoa izay mamaritra ny fifanarahana eo amin'ny banky sy ny orinasa iray.
Ny trosa arahin'antoka dia trosa nomena alalana amin'ny fampindramam-bola trano iray na mihoatra ny fananana mpampindram-bola ho fananan'ny mpampindram-bola.
Fanavotana ny trosa
Ny fitsipiky ny famerenam-bola (na fanangonana anarana) dia ny hanangona ny trosa rehetra aminao. Manatsotra ny fitantanana ny teti-bola izany ary mamela anao hamerina hijery ny habetsaky ny vola isam-bolana sy ny faharetan'ny fikajianao.
Findram-bola ho an'ny mpanjifa
Te handravaka na hanavao ny tranonao amin'ny fampindramam-bola fanavaozana ve ianao? Te-handeha amin'ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny crédit fitsangatsanganana ve ianao?
Ny fampindramam-bola amin'ny banky dia mamatsy vola ho an'ny mpandraharaha ara-toekarena isan-karazany (sampana ara-dalàna na olona voajanahary) ataon'ny andrim-bola. Alohan'ny nanomezana azy ireo dia manao fanadihadiana momba ny risika ary koa ny fahazoana antoka.
Ny fampindramam-bola fifanarahana
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fampindramam-bola mahazatra sy ny karazana fampindramam-trosa hafa dia ny fampindramam-bola mahazatra dia tsy amboarin'ny sampandraharaham-panjakana na manambola fikambanam-panjakana iray. Io no antsoinay fa fampindramam-bola tsy GSE. Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana.
Ny trosa mahazatra
Ny fampindramam-bola mahazatra dia ireo nifanekena tamin'ny fividianana bebe kokoa na tsy manan-danja: fiara, fitaovana an-trano, fandaniam-bola andavanandro ... Ho an'ny mpampindram-bola miatrika fanohanana ara-bola lehibe, ny habetsaky ny vola dia afaka manampy azy hanao ny fividianana na manatsara ny teti-bolany.
Miasa ny findramana
Ny trosa ara-tsosialy
Araka ny lazain'ny anarany dia ny fampindramam-piarahamonina dia karazana fampindramam-bola natao hanampiana ireo fianakaviana na olona manana karama ambany, na amin'ny alàlan'ny asa ambany karama na fomba hafa, hanatanterahana tetik'asa, miaraka amina tahiry voafaritra arakaraka ny fidiram-bolan'ny tsirairay tokantrano.
Ny mpampindram-bola mpampita trosa dia fampindramam-bola vetivety ahafahan'ny mpanjifany hahazo trano alohan'ny hanakatonana ny varotra hafa. Ity trosa famindram-po ity dia safidy mahaliana ho an'ny tompon-trano maniry ny hipetraka amin'ny trano malalaka kokoa na tsara kokoa.
Amin'ny findramam-bola tsara
Tsy toa ny fampindramam-bola azafady, fa fampindramam-bola io no andoavanao vola mandritra ny fe-potoana itoriany. Ny renivohitra dia tsy amboarina fa averina amin'ny fametrahana tokana amin'ny fotoana matotra.
Ny fampindramam-bola mifehy dia mifanaraka amin'ny fepetra hentitra voafaritry ny governemanta. Araka izany, ny banky dia tsy maintsy ampiharina amin'ny fomba feno ny fepetra manome sy ny tari-dalana napetraky ny fitsipika.
Ity karazana fampindram-bola amin'ny banky ity dia antsoina hoe "maimaim-poana" satria tsy miankina amin'ny fitsipika mifehy ny governemanta, na amin'ny haavon'ny mpampiasa, ilay fonosana ara-bola, na koa momba ny famatsiambola ara-bola. Manohitra ny fahazoan-trosa mifehy izany, izay tsy maintsy manaraka ny fitsipika maromaro.
Ny findramam-bola findramam-bola dia nomen'ny andrim-bola mpampindram-bola amin'ny olona iray hamatsy vola ny fahazoana trano.
Ny fampindramam-bola fanodinana
Ny fampandriana fampindramam-bola (banky na fatorana) dia ampahany amin'ny renivohitra izay averina isaky ny fahamatorana isam-bolana (e.g. isam-bolana). Io fandoavambola io dia atao miaraka amin'ny zana-bola ilaina mandritra ny fotoana mitovy.
Hafa noho ny fomban-drazana mahazatra (PC) fomban-drazana nentin-drazana no ilazana fa hamatsy vola ny trano fonenana (trano vaovao na tranainy) ireo tokantrano ambany-bola izay afaka, amin'ny alàlan'ny toe-karena, dia hahazo tombony amin'ny fanampiana manokana an'ny trano fonenana (PHA).
Ny fiantohana mora foana dia manantena ireo fiovana mety hitranga amin'ny alàlan'ny mamela ny mpampindram-bola hitantana ny trosany amin'ny alàlan'ny fananana ny fanovana ny volan'izy ireo, ao anatin'ny fepetra sasany.
Ny fampindramam-bola havaozina
Ny fampindramam-bola miovaova dia fampindramam-pizara arakaraka ny tahan'ny zanabola izay, tsy mitovy amin'ny tahan'ny voafetra dia afaka miovaova mandritra ny androm-piainan'ny mpampindram-bola, arakaraka ny toe-piainan'ny tsenam-bola.
Ny KONRAD CREDIT BANK dia manam-pahaizana amin'ny trosan'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao, izay manohana anao isan'andro isan'andro amin'ny tetikasanao tsirairay ary manolotra anao vahaolana ara...
Ahoana no maha-izy antsika?
Ny tolotra omena antsika
Misoratra anarana amin'ny kaonty an-tranonkala ary tohizo miaraka amin'ny vaovao sy ny fifanarahana farany!